Maxaa ku farxad geliya? – ubahaden.com
Maxaa ku farxad geliya?
By ubah Aden	 On Apr 14, 2017 Last updated Dec 4, 2017
Waxaan aaminsanahey in farxada aysan ku xirney qananimo iyo caannimo. Inta guri, baabuur ama lacag aad heysato ama sida laguu yaqaan, aysan kaa dhigeyn qofka farxadeysan. Qaramada Midoobay ayaa warbixin ay ka bixiyeen farxada ku tilmaameen Denmark dalka aduunka ugu farxada badan, hadana ugu badan isdilka (suicide). Dalalka aan ku nool nahney iyagoo ah dad wax walba heysta, ayay hadana murugada, cudurada qalbiga iyo is dilka ay ku badan yihiin. Noloshaa qalafsan oo aan cagaheena ku soo raadsaney, saameyn ayay nagu yeelatey. Waxaa nagu badan inaan dhibka ka hadalano. Oo is eedeynta iyo cabaadka ayaa caadeysano.
Waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxa aan u arko farxada, qeyb ka mid ah.
Waxaan nolosha ku qiimeeyo iyo waxa i farxad geliya, wey ka gedisnaan karaan sida aad adiga u aragtid. Wax dhowr sano horteed i farxad gelin jirey, ayaa maantey i farxad ii laheyn. Waxaan xasuustaa ciidaha iyo u dabaaldega dhalashooyinka aan dhibsan jirey. Dareen daciifnimo iyo murugo ayaa maalintaa dareemi jirey. Maalmahaana hadaad waalid tahey, waxa ay caruurta kaa doonayaan waa farxad iyo qosol. Murugo maalinta lama yaqaan. Waxaan baaritaan ku sameeyay waxa kalifaya dareenkaa. Waxaan soo heley daciifnimada iyo murugada aan maalintaa dareemayo, ay ku saleysan tahey shaleytanimo. Wax tagey iyo waxaan awood u laheyn. Wax badan oo aan awood u laheyn baa jira. Wax badan oo aan qaban karin baa jira. Wax badan oo aan garaneynin baa jira. Wax badan oo aan dulqaad u laheyn baa jira, balse hal shey awood waa u leeyahey. Waana sida aan rabo inay nolosheyda noqoto. From that moment ayaan go`aansadey in farxadeyda shey ama qof aysan ku xirnaan.
Waxaan baraa caruurta in farxad aysan ku xirneyn inaad wax weyn hesho ama aad sameyso. Inkasoo la dhaho waxyaalaha farxada keeni kara waxaa ka mid ah u dhalasho, isbedel weyn oo nolosha soo gaaro iyo doorasho. Ayaa kaa sadexaad ee doorashada, iigu muhiimsan tahey in ay bartaan. In ay ogyihiin in ay dooran karaan habka ay noloshooda u rabaan in ay noqoto. Ayna awood u leeyihiin in ay sameysan karaan, nolosha ay rabaan. Balse farxada ay qeyb weyn oo muhiim ah ay ka tahey nolosha.
Tusaale ahaan, maantoo kale waxaa i farxad geliyay in aan guriga hagaagsaney. Iyadoon la murmin. Waa farxad weyn, hadaad garsoornimo ka fakado. Qadaan wada sameysaney oo wada cuney, iyadoo lays wada dhageysanayo. Tan iigu fiicneynd ayaa aheyd in la xasuustey sharciga miiska qadada. Inaan wax teleefon ah ama ipod miiska lala soo fariisan. Taana waa u sheegey in ay i farxad gelisey. Sheegitaankaa 2 saameyn ayuu ku yeelan karaa. Waa midee waxey isku dayayaan in ay xasuustaan waxa aan u sheego, ileyn hooyo wey ku farxeysaa markey mas`uuliyadooda ka soo baxaan. Tan kalana waxey baranayaan in farxad aysan ku xirneyn wax weyn balse ay tahey ficil iyo doorasho.
Gurigeena waxaa caadi ka ah in layska weydiiyo ma faraxsan tahey maantey? Badalkii sidee tahey maantey? Maqalkaa kalmada kaama dhigayo inaad faraxsanaanto, balse waxey ku xasuusin qiimaha kalmadaa.
Qaraabo, ma dhiigbaa mise is fahan?